Motokari yemotokari zvimwe >>
Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, zvekurima michina, jenareta seti, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, yakakwira density, kutsetseka, kupenya uye kusimba mushure mekupedza Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Camshaft yemotokari zvimwe >>
Mota inobhururuka zvimwe >>
Zvemota humburumbira musoro zvimwe >>
Yakakwira-mhando mota crankshaft yakakodzera Ren ...
Iyo yakazara yakazara yemotokari crankshafts Cran ...
Shijiazhuang Samuel Auto Zvikamu Co., Ltd. inyanzvi inogadzira zvikamu zvemota. Mumakore ekugadzira nekushanda, yakagadzira yekugadzira uye yekugadzirisa mutsara nehunyanzvi hwetekinoroji, zvigadzirwa zvekugadzira zvemberi, nzira dzekutanga-kirasi yekuyedza uye hwakasimba manejimendi manejimendi. ISO9001 2000 yepasi rose mhando system setifiketi, iyo mhando inosvika kune ehunyanzvi zviyero zvemukati kupisa injini crankshaft JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.